Ukufumanisa i-Cardiac Anatomy: Intliziyo yakho
Inkqubo yokujikeleza kwegazi - okanye Inkqubo yentliziyo - Inentliziyo kunye nemithambo yegazi. Intliziyo, eyona nto iphambili kwinkqubo yokujikeleza kwegazi, ibangela ukuhamba kwegazi. Isenzo sokumpompa kwentliziyo sikhama igazi liphume entliziyweni, kwaye uxinzelelo olwenza ukuba lunyanzele igazi ngemithambo yegazi. Ukuthetha ngokwenyama, intliziyo imalunga kuphela nenqindi lakho. Ngapha koko, ayimiswanga ngokwenyani njengentliziyo; Intliziyo yomntu imile okwe cone (jonga umfanekiso 1). Ilele phakathi kwemiphunga yakho, nje ngasemva (ngasemva) kwisternum yakho, kunye nencam (incopho) yeekhowuni zikhomba ngasekhohlo. Ngapha koko, intliziyo yakho imi kancinane ngasekhohlo kweziko esifubeni sakho.
Umzobo 1: Umbono wangaphambili wentliziyo.
Uluhlu olungqindilili lweethishu zemisipha kunye nenwebu ekhuselayo esongelayo ibe ngamanqanaba amabini, abizwa ngokuba yi I-pericardium okanye inwebu yesisu, jikeleza intliziyo. Intliziyo ngokwayo liqela elilungelelaniswe kakuhle lezithuba ezingenanto.
I-Endocardium: Olu luhlu lwangaphakathi lwentliziyo lwenziwe izicwili endothelial obeka ngaphakathi entliziyweni kwaye uyaqhubeka nayo yonke imithambo yakho yegazi.
Isithuba sepericardial: Ukusebenza indlela yakho yokuphuma, kwesi sithuba, ufumana imithambo yegazi- imithambo yegazi ebonelela ngezihlunu zentliziyo ngezakhamzimba kunye neoksijini.
Ikhadi lobushushu: Olu luhlu lulandelayo kukusebenza nzima, ukwenza ikhontrakthi, ungqameko lwentliziyo yakho ( imyo- ibhekisa kwimisipha).
Epicardium: Olu luhlu lwangaphakathi lwe-pericardium lugubungela i-myocardium. I-epicardium iyimfihlo ulwelo lweparicardial, ekhusela izihlunu njengoko zihlikihla kunye xa intliziyo ibetha.
I-Parietal pericardium: Ngaphandle kwesisu, usebenza indlela yokuphumela ngaphandle kwentliziyo, olu luhlu lwangaphandle lwentliziyo sisigqubuthelo esimhlophe, esimhlophe esenziwe ngezicwili ezinomthambo ezijoyina imithambo yegazi emikhulu (njenge-aorta) kwi-sternum kunye ne-diaphragm . Intliziyo yakho ayihambi nje esifubeni sakho. Njenge-epicardium, i I-pericardium yeparietali kwaneemfihlo Ulwelo lweparicardial ukuthambisa izicwili zentliziyo.
Izithuba ezingenanto zentliziyo zibizwa amagumbi. Amagumbi amane, amabini kwicala ngalinye, gcwalisa igazi kwaye ukhulule igazi kwipatheni enesingqi:
ipilisi yakho eluhlaza engama-833
Ngokudibeneyo, i-atrium yasekhohlo kunye ne-atrium yasekunene zezi atria (ubuninzi). Inwebu ebizwa ngokuba yi iseptum yangaphakathi yahlula i-atria, kunye nenwebu ebizwa ngokuba yi septum yangaphakathi Ukwahlula ii-ventricles ezimbini. Igumbi ngalinye lentliziyo lidlala indima ethile ekumpompa igazi, kwaye ukwakheka kwegumbi ngalinye kuhambelana nomsebenzi walo ngokugqibeleleyo.
Intliziyo iqulethe ezininzi Izivalo, amagama akuxelela indawo akuyo okanye iimpawu zeatomic (jonga umfanekiso 2). Umzekelo, i kwiiyunithi (KA) Izivalo ziphakathi kwe-atria kunye nee-ventricles; i bicuspid (KA) ivelufa ineempiko ezimbini, kwaye tricuspid (KA) ivelufa ineempiko ezintathu. Inkqubo ye- semilunar kwemithambo zenziwe njengesiqingatha seenyanga. Iivalvu zisebenza njengokutshixa kumjelo: Zivumela inani legazi elilinganisiweyo kwigumbi, kwaye zithintela igazi ukuba lingabuyeli umva. Ivalves igcina igazi lihamba kwicala elifanelekileyo emendweni, elinceda ukugcina isingqi esifanelekileyo entliziyweni nakuwe.
Umzobo 2: Ivaluva zentliziyo.
wenza njani umsebenzi
Ngaba i-adderall ikwenza ukuba uqhinwe
Umda wefomula yempazamo ubalasele
mp4 codex yewindows media player
ndinayo iseti yealam
iintlungu ezibuthuntu kwicala lasekunene phantsi kweembambo
iipilisi zentlungu yamazinyo